🥇 ▷ Ku wanaajiso sheekooyinkaaga Instagram barnaamijkan cajiibka ah ✅
Ku wanaajiso sheekooyinkaaga Instagram barnaamijkan cajiibka ah
Iyada oo hordhac u ah sheekooyinka dalabka Barta Instagram u qaybisay sawirrada sawirrada isgaarsiinta luqadda; awood u siinta hab cusub oo lagu sameeyo waxyaabaha: ka sii cusub, toos ah, kala duwan. Tirada ikhtiyaarada ah ee ay sheekooyinku haystaan ​​ayaa aad u sarreeya, laakiin marwalba waa la sii kordhin karaa. Tusaale ahaan, arjiga Dhaqdhaqaaq.
Sida loo isticmaalo shaandhayaasha qarsoon ee sheekooyinka ee Instagram Waxaan kuu sheegeynaa sida aad u dhaqaajin karto oo aad u keydin laheyd shaandhooyinka qarsoon ee ku jira qeybta sheekooyinka ee Instagram. Waa boqolaal!
Appka aan ka hadlaynaa wuxuu u oggolaanayaa abuurista sheekooyin aad u adag iyo sheekooyin nool; oo wuxuu siinayaa ikhtiyaar ah inuu ku daro astaan-tirin la’aanta Waxay kuu soo bandhigaysaa qalab fara badan oo aad ku aamini karto sheekooyinka ku jira Instagram, laga soo qaado sawirada illaa fiidyowyada, sidoo kale qoraalka sheekooyinka. Isla markaana kuma lug leh dhibaatooyin aad u fara badan: marba markii la rakibo Dhaqdhaqaaq Taleefankaaga casriga ah ee aad ku jirtid Instagram-ka Waxay ku qaadan doontaa isbedel cajiib ah tayada.
Mouve wuxuu kuu oggolaanayaa inaad abuurto Sheekooyin aan tira lahayn oo asalka u ah Instagram
Sidii aannu nidhi, taasi maahan Barta Instagram caqabad ku abuuraya gudaha Sheekooyinka maadaama ay kuwanu bixinayaan xadidnaan xaga qalabka, dhejisyada iyo miirayaasha si ay u abuuraan nooc kasta oo isgaarsiineed. Si kastaba ha noqotee, Dhaqdhaqaaq Waxay u sii socotaa si ka sareysa maadaama ay bixiso wax ka badan 100 tusaalooyin horay loo sii qeexay si loo habeeyo sheekooyinkaaga hab hab sare ah. Haddii aad qaadato wakhti yar waxaad abuuri kartaa shaqooyin farshaxan oo asli ah.
Mouve wuxuu leeyahay in kabadan boqol buug oo aad ku dari karto sawirro, qoraallo, muusig iyo saameyn kaladuwan si loo abuuro sheekada ugu fiican. Si fudud u dooro shaxanka aad ugu jeceshahay, ka dibna ku dar sawirrada meelaha ku habboon, ku beddel cabbirkooda ama hanuuninta, ku dar qoraalka midabaynta ee ku habboon meesha ay ka kooban tahay kuna dhammeyso Sheekada qaab muuqaal ah si fudud ayaad ula wadaagi kartaa barta Instagram. Marka lagu daro WhatsApp, Facebook, Twitter ama halkaad doorbiday.
Mouve waa codsi aad u taxadar badan oo dhammaystiran mudan tahay inaad isku daydo haddii sheekooyinka Instagram ay yihiin kuwa aad jeceshahay. Waxay kuu oggolaaneysaa inaad u abuurto iyaga habab badan oo kala duwan iyadoo aad siineyso daabacaadahaaga qaab xirfad-yaqaan, wax aad u caawin doona. Dabcan, sidii app bilaash ah oo Mouve leeyahay dib-u dhac calaamad biyo-qabad ku dhig qoraallada. Maahan wax aad looga xumaado, laakiin had iyo jeer waad ku saari kartaa adigoo wata rukhsad. Muhiimaduna maaha.
Waad soo dejisan kartaa U dhaqaaq Android lacag la’aan. Waa dhammaystir aad u wanaagsan Instagram. Waxaad sidoo kale kala soo degsan kartaa Apk laga bilaabo UpToDown.
Mouve – sameeyaha sheekooyinka fiidiyaha fiidiyowga ah ee loogu talagalay Instagram Nooca: Qoraaga: Waxaa loo baahan yahay GUDAHA GUDAHA INSTALL APK Cabbirka: